Antsafa · Jolay, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Antsafa · Jolay, 2019
Jona 2019 10 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Antsafa tamin'ny Jolay, 2019
Fantaro i Kpénahi Traoré, nitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny 24-30 Jolay
Mediam-bahoaka31 Jolay 2019
Hifandimby ireo Afrikana mpikatroky ny teny sy mpanandrateny hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang hizara ny zava-niainany tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fiteny Afrikana. Ny lahatsoratra etoana dia momba an'i Kpénahi Traoré (@kpenahiss) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro itantanany ny kaonty.
Fantaro i Margaret Noodin, mpitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech mandritra ny herinandron'ny 25-31 jolay
Mediam-bahoaka29 Jolay 2019
Mpampianatra teny anglisy sy ny tenindrazany i Margaret Noodin, mpitantana ny kaonty @NativeLangsTech mandritra ny herinandron'ny 25-31 jolay ity. Hozarainy amintsika ny fomba fijeriny ny fiteny Anishinaabemowin.
Fantaro i Mei Jeanne Wagner, hitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech mandritra ny herinandron'ny 11-17 Jolay
Mediam-bahoaka19 Jolay 2019
Fantaro i Mei Jeanne Wagner izay hitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTechTwitter mandritra ny 11-17 Jolay 2019. Hizara fomba fijery momba ny fiteny Hawaiiana izy.
Fantaro i Davy Nlovu, hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron'i 17-23 jolay
Andao hofantarintsika bebe kokoa ny momba an'i Davy Nlovu, hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron'ny 17-2 jolay 2019. Hozarainy amintsika ny fomba fijeriny ny fiteny Tjwao.
Fantaro i Bonface Witaba, mitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron'ny 10-16 jolay
Mediam-bahoaka15 Jolay 2019
Andao hofantarina bebe kokoa ny momba an'i Bonface Witaba, mitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron'ny 10-16 jolay 2019. Hozarainy amintsika ny fomba fijeriny ny fiteny Swahili.